mirc မှာ မြန်မာလိုချက်မယ် . . - MYSTERY ZILLION
mirc မှာ မြန်မာလိုချက်မယ် . .
mirc ကိုအရင်တုန်းက တော်တော်လေးအသုံးပြုခဲ့ကြတယ် . . person, facebook တို့လို ဆိုဒ်တွေပေါ်လာတော့ mirc ကိုမေ့ကုန်ကြပီလားမသိဘူး. .mirc က အကောင့်လုပ်စရာမလိုပဲ . . nickname လေးရေးပြီးတော့ chat လို့ရတော့ .. တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ် . .ခက်တာက မြန်မာလိုမရတော့ ဘားဂလိ လိုပဲရိုက်ကြတာများတယ် . . ကျွန်တော်ဆီမှာလည်း mirc ဗားရှင်းအဟောင်း 6.1 နဲ့ပဲ သုံးနေတာ . .မြန်မာလိုရိုက်ကြည့်ရင် ???? အဲ့လိုတွေပဲပေါ်တယ် . .
ဗားရှင်းအသစ်တွေထွက်လည်း သိပ်စိတ်မ၀င်စားမိဘူး . .. ဒီနေ့တော့ mirc 7.1 တွေ့လို့ စမ်းသုံးကြည့်တာ . .zawgyi ဖောင့်နဲ့ စမ်းကြည့်မယ်ဆိုပြီး font ချိန်းကြည့်တာ အဆင်ပြေတယ် . . အဲ့ဒါနဲ့ တခြားတစ်ယောက်ကို မြန်လာလိုရိုက်ပီး ချက်ကြည့်တာ . .သူ့ဘက်မှာzawgyi font မချိန်းထားဘူးဆိုတော့ . . ဘယ်လိုပေါ်လို့လဲတော့မသိဘူး . . သူ့ကိုဆဲတယ်ထင်သွားတယ်
mirc 7.1 ကိုသုံးကြည့်ချင်ရင်တော့ . . .
mirc က အကောင့်လုပ်စရာမလိုပဲ . . nickname လေးရေးပြီးတော့ chat လို့ရတော့ .. တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ် zawgyi ဖောင့်နဲ့ စမ်းကြည့်မယ်ဆိုပြီး font ချိန်းကြည့်တာ အဆင်ပြေတယ် . . အဲ့ဒါနဲ့ တခြားတစ်ယောက်ကို မြန်လာလိုရိုက်ပီး ချက်ကြည့်တာ . .သူ့ဘက်မှာzawgyi font မချိန်းထားဘူးဆိုတော့ . . ဘယ်လိုပေါ်လို့လဲတော့မသိဘူး . . သူ့ကိုဆဲတယ်ထင်သွားတယ်
မြန်မာလို ရရင်တော့ စမ်းကြည့်အုံးမယ်
Chat သူအချင်းချင်း Zawgyi font တော့ ရှိရမှာပေါ့
ဒါနဲ့ သိချင်လို့ မေးတာပါ အခြား မြန်မာ Font ဥပမာ Myanmar2တို့ ၀င်းအင်း၀ တို့ နဲ့ လည်း ရရဲ့လား
မြန်မာFont တိုင်းအဆင်ပြေရင် ပိုကောင်းတာပေါ့ ဗျာ
ဟုတ်ပါတယ်။ MIRC မှာ ဇော်ဂျီဖောင့်ရသွားတော့ သုံးတဲ့လူတွေလည်း အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ wininnwa ဖောင့်ကတော့ ကျနော်စမ်းကြည်.တာ လေးထောင့်ကွက်ပဲ ပေါ်ပါတယ်။
သွားချက်လိုက်ပါတယ် မြန်မာလို ( you are banned) တဲ့
မြန်မာလို ချက်မယ်ဆိုရင် ချက်လို့ ရတာ ဟုတ်ပါတယ် ဗားရှင်း 7.1 မှ ချက်လို့ ရတာပါ။ အဲဒီလို ချက်လို့ ရဖို့ အတွက်ဆိုရင် အားလုံး(ဟိုဘက်ဒီဘက်)ကလည်း ဗားရှင်း 7.1 ဖြစ်မှ အဆင်ပြေမှာပါ။ တခြားဗားရှင်းအနိမ့်တွေဆိုရင်တော့ မရပါဘူး။ ဒါ့အပြင် Font ကိုလည်း Default အနေနဲ့ Zawt gyi One font ကိုပြောင်းပေးထားမှ အဆင်ပြေမှာပါ။ နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ အားလုံး အဲဒီလိုသိပြီး ဆိုင်တိုင်း လူတိုင်းက မြန်မာလို ပြောင်းတက်ပြီး တော့ မြန်မာလို ချက်နိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်..
ဟုတ်ပါတယ် . . ဆိုင်းတိုင်းလူတိုင်းက gtalk မှာ zawgyi fonts သုံးသလို . .တခြားဆော့၀ဲလ်တွေမှာပါသုံးထားမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေပြေနဲ့ချက်လို့ရမှာပါ . . Mirc မှာzawgyi ပြောင်းလို့ရသလို . Skype မှာလည်း ရပါတယ် . .VZO မှာ စမ်းကြည့်တာ လောလောဆယ်တော့မရသေးဘူး . ..
7.1 ကို crack ပါတဲ့ ဟာလေး နဲ့ ရနိုင်မလား မသိဘူး.... ရှိတဲ့ သူများကို အကူအညီတောင်းပါတယ်
ကျွန်တော်ပေးထားတာ . .crack နဲ့ပါ . . ..